10 रोगहरू जुन हातले भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। – Noor Health Life
10 रोगहरू जुन हातले भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ।
धेरै रोगको लक्षण हातले अनुमान गर्न सकिन्छ।
औँलाको लम्बाइदेखि पकड बलसम्म, हाम्रा हातहरूले विभिन्न प्रकारका चिकित्सा खतराहरूको भविष्यवाणी गर्छन्।
तर के तपाईलाई थाहा छ हाम्रो हातमा रहेका केही सामान्य चिजले स्वास्थ्यलाई कति हदसम्म खतराको संकेत गर्छ ?
चिकित्सा विज्ञान अनुसार हाम्रो हातमा देखिने केही लक्षणहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
औंलाको लम्बाइ: जोर्नी दुख्ने जोखिम
यदि महिलाको तेस्रो औँला पुरुषमा हुने औँला भन्दा लामो छ भने उसलाई घुँडा दुख्ने सम्भावना दोब्बर हुन्छ । मेडिकल जर्नल आर्थराइटिस एन्ड रिउमेटिज्ममा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार एस्ट्रोजेन हार्मोनको कम स्तर एक सम्भावित कारण हो।
हात मिलाउनु: पार्किन्सन रोगका लक्षणहरू
हात मिलाउनु कहिलेकाहीँ अत्यधिक क्याफिन प्रयोग वा केहि औषधिहरूको साइड इफेक्टको परिणाम हुन सक्छ। तर यदि यो एक हातमा छ भने, यो तुरुन्तै डाक्टर हेर्न राम्रो छ। एउटा हात कम्पन पार्किन्सन रोगको पहिलो संकेत हुन सक्छ।
नङको रंग: मृगौला रोग
एउटा अध्ययनले गम्भीर मृगौला रोग भएका १०० जना बिरामीहरूलाई हेरेको र पत्ता लगायो कि 36% का नङ दुई रङका (नङको तल्लो भाग सेतो र माथिल्लो भाग खैरो थियो)। नङको यस अवस्थाको सम्भावित कारणहरू निश्चित हार्मोनहरू र गम्भीर एनीमियामा वृद्धि हुन सक्छ, जुन दुवै मृगौला रोगको भाग हुन्। यदि तपाईंले आफ्नो नङमा दुईवटा रङ देख्नुभयो वा ती कालो भएमा तुरुन्तै डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस् किनभने गाढा रङ पनि छालाको क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ।
पकड बल: हृदय स्वास्थ्य
कमजोर पकड हृदयघात वा स्ट्रोकको अग्रगामी हुन सक्छ र यसबाट बच्ने सम्भावना कम हुन्छ। 17 देशका बासिन्दाहरूको अध्ययनले पत्ता लगायो कि ग्रिप बलले रक्तचाप भन्दा अकाल मृत्युको राम्रो भविष्यवाणी गर्न सक्छ। अन्वेषकहरूका अनुसार, समग्र मांसपेशी बल र फिटनेस मूल्याङ्कन गर्न र हृदय रोगबाट बच्नको लागि शारीरिक गतिविधि सुझाव दिन पकड बल प्रयोग गर्न सकिन्छ।
औंठाछाप: उच्च रक्तचाप
नूर हेल्थ लाइफ अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि गोलाकार औंलाछाप भएका एक वा धेरै औंलाहरू भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च रक्तचापको जोखिम हुन सक्छ। औंलाहरू जति गोलाकार हुन्छन्, रक्तचाप त्यति नै बढी हुन्छ।
हातमा पसिना आउनु : धेरै पसिना आउनु
हातमा अत्याधिक पसिना आउनुले थाइराइड रोग निम्त्याउन सक्छ र साथै अत्याधिक पसिना आउन सक्छ, जसमा पसिना ग्रन्थीहरू बढी सक्रिय हुन्छन्। धेरैजसो मानिसहरूले शरीरको एक वा दुई भागहरू जस्तै कांख, हत्केला वा खुट्टामा यो समस्या अनुभव गर्छन्। डाक्टरहरूले यसलाई जाँच गरेर उपचार लेख्न सक्छन्।
पहेंलो हात: एनीमिया।
रक्तअल्पता वा रक्तअल्पताका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् जस्तै गम्भीर वा पुरानो एनीमिया आदि। यद्यपि, एनिमिया जुनसुकै प्रकारको भए पनि, प्रभावित व्यक्तिको शरीरमा स्वस्थ रक्त कोशिकाहरूको मात्राले अक्सिजन आपूर्ति गर्न पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले यो रोगको सबैभन्दा सामान्य लक्षण छालामा पहेँलो देखिनु, विशेष गरी हात र नङको छाला पहेँलो हुनु हो।
फोक्सो को रोगहरु
क्लब नेल वा औँलाले नङको आधारलाई नरम पार्नुलाई बुझाउँछ जबकि नङको वरिपरिको छाला चम्किलो हुन्छ, त्यसैगरी नङहरू सामान्यभन्दा धेरै घुम्ने हुँदा औंलाका टुप्पाहरू पहिलेभन्दा ठूला हुन्छन्, यो सामान्यतया फोक्सोको सङ्केत हो। औँला वा नङ अक्सिजनको कमीले ग्रस्त भएकाले रोगलाई संकेत गर्छ। वैसे, यो लक्षण पनि रक्त वाहिकाहरू, कलेजो रोग को रोग को संकेत हुन सक्छ।
के यो नङको संरचना क्यान्सरको लक्षण होइन?
छालामा रातो दाग धेरै रोगहरूको संकेत हुन सक्छ, तर यो सामान्यतया कलेजो रोगको सबैभन्दा सामान्य लक्षण हो। हातको यो अवस्था भएका केही व्यक्तिहरूले हत्केलाहरूमा अत्यधिक न्यानोपन अनुभव गर्छन्, जसले कलेजोमा क्षतिको संकेत गर्न सक्छ। औंलाहरूको जोर्नीमा दुखाइ – कारण र उपचार
विशेषज्ञहरूले तथ्यलाई नोट गर्छन् कि धेरै रोगहरू आज “सानो” छन्। बाटो, वृद्धहरूको लागि मात्र नकारात्मक, युवाहरू बढ्दो रूपमा प्रभावित छन्। यसैले, महिलाहरु को एक ठूलो संख्या जोर्नी रोगहरु बाट ग्रस्त छ, र धेरै डाक्टरहरु औंलाहरु को जोड़हरु मा दुखाइ को शिकायत गर्दछ। आउनुहोस्, किनभने औंलाहरूले औंलाहरूको औंला जोर्नीहरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ, र यस्तो उपचार आवश्यक छ।
औंला जोर्नी किन दुख्छ?
औंलाहरूको जोर्नीहरूमा दुखाइ दर्दनाक कारकहरूको कारण हुन सक्छ: तान्नु वा झनझन, क्षतिपूर्ति, फ्र्याक्चर, आदि। यस्तो अवस्थामा, एक नियमको रूपमा, कारण स्पष्ट छ। क्षणिक दुखाइ कहिलेकाहीं तर्कहीन वा लामो शारीरिक वृद्धि संग सम्बन्धित छ, एक असहज स्थिति मा हात को उपस्थिति। शरीरका अन्य जोर्नीहरूमा जस्तै औँलाको जोर्नीहरूमा प्राय: क्याल्सियमको कमी, हर्मोनको अधिक आराम, दौराको समयमा महिलाहरूमा स्नायु चकनाका कारण हुन सक्छ।
तर यदि औंलाको जोर्नीहरूमा दुखाइ कुनै स्पष्ट कारण बिना लामो समयसम्म चिन्तित छ भने, यो गम्भीर रोगहरूसँग जोडिएको हुन सक्छ। मुख्यहरू विचार गर्नुहोस्:
ओस्टियोआर्थराइटिस एक रोग हो जुन शरीरमा चयापचय विकार, हात, आनुवंशिक कारकहरु मा व्यापार भार को कारण हुन सक्छ। यस अवस्थामा, गैर-विषाक्त जोडहरूको विकृति छ, जसमा औंलाहरूमा विशिष्ट मानसिक नोडलहरू बन्छन्।
Rheumatoid गठिया एक degenerative autoimmune रोग हो जसले शरीरका विभिन्न जोर्नीहरूलाई असर गर्छ, र प्रायः औंलाहरू र औंलाहरूबाट सुरु हुन्छ। यस अवस्थामा, भडकाऊ क्षति, डर्मेटाइटिस र जोडहरू माथि लोभ, जो बिस्तारै गाढा, विकृत हुन्छ। यस अवस्थामा, राती र बिहान दुखाइ अक्सर पीडादायी हुन्छ।
गेट मेटाबोलिक डिसअर्डरका कारण हुने रोग हो जसमा जोर्नीभित्र युरिक एसिड लवणको क्रिस्टल जम्मा हुन्छ। हात खुट्टा जोर्नी प्रभावित हुन सक्छ। जब गाउटी दुखाइ धेरै गम्भीर हुन्छ, जलन, छालाको जोर्नीहरूमा लहरहरू, चालमा छिटो प्रतिबन्ध।
पुनरुत्थान एक सम्भावित कारण हो यदि औंलाको जोर्नी, जसमा विकिरण जोइन्ट मेटाटार्सल हड्डीमा चोट लागेको छ। यो गणित औंलाको शारीरिक अधिभारसँग सम्बन्धित छ र ओस्टियोआर्थराइटिसको बारम्बार अवस्था हो।
मिनरल लिग्निनाइटिस (“स्न्यापिङ औंला”) टेन्डनको भडकाउने क्षतिसँग सम्बन्धित एक रोग हो, जुन लोचदार औंलाको मोटाईको विस्तारको लागि जिम्मेवार हुन्छ। यो तथ्यको कारण हुन सक्छ कि औंला जोर्नीहरू निचोल्नु पर्छ र तिनीहरू हराउँदा एक क्लिक हुन्छ।
कृषि सम्बन्ध जोर्नीहरूद्वारा निर्देशित हुन्छ, जसले प्रायः तिनीहरूको छालामा भएकाहरूलाई जन्म दिन्छ जो पहिले नै गरिबहरूको छाला हुन्। रोगले कुनै पनि औंलालाई असर गर्न सक्छ, जसले गर्दा दुखाइ, पीडा, सूजन र सबै जोर्नीहरूमा क्र्याम्प हुन सक्छ।
बर्साइटिस भनेको औंलाको जोर्नीमा हुने सूजन हो, जसमा तिनीहरूको गुहामा तरल पदार्थ जम्मा हुन्छ। घाउहरू, औंलाहरूमा बोझ, संक्रमणको प्रवेशले गणित निम्त्याउन सक्छ। यस अवस्थामा प्रभावित संयुक्त, लोभ क्षेत्र मा पीडादायी सूजन को गठन विशेषता हो।
संयुक्त दुखाइ को उपचार
अनुचित रूपमा दुखाइ जोर्नीहरू हटाउन के आवश्यक छ भन्न असम्भव छ। उपचार धेरै हदसम्म एक हातको औंलाहरूमा भएका जोर्नीहरू किन घाइते भएका छन्, यो आघात वा रोगको परिणाम हो भन्नेमा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, उपयुक्त उपचारको नियुक्तिको लागि डाक्टरसँग परामर्श र जाँच गर्नुपर्छ।
अधिकतर अवस्थामा, यो लक्षण संग, गैर-स्टेरोइडल विरोधी भड़काऊ ड्रग्स, chondroprotectors, एंटीबायोटिक्स, रंग अभ्यास, हार्मोन निर्धारित गरिन्छ। मसाज, फिजियोथेरापी प्रक्रिया, औंला व्यायाम पनि गर्न आवश्यक छ। कम्तिमा बिरामीहरूलाई सर्जिकल हस्तक्षेप चाहिन्छ। यसलाई स्वतन्त्र रूपमा उपचार गर्न सिफारिस गरिएको छैन, किनकि यो थाहा छ कि औंलाहरूको जोर्नी दुखाइबाट प्रभावित हुन्छ। थप प्रश्न र उत्तरहरू प्राप्त गर्न तपाईंले नूर हेल्थ लाइफसँग इमेल र व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। noormedlife@gmail.com